Malunga ne-10 yamabinzana athile obunzima be-catracha-Geofumadas
Phantse i-10 ibinzana elilodwa le-catracha crisis
NgoJulayi, 2009 Izopolitiko kunye nentando yeninzi
... emva kokundinika izikhonkwane ezibini ezingalweni, ndagqibela kwelokuba ndiyamkele into yokuba andiphuphi.
... ewe Honduras ikhutshiwe Ileta ye-OAS ngokusebenza kwangoko, kwaye i-OAS ikhupha iHonduras, ngaba iZelaya isemoyeni?
… Baninzi abantu baseNicaragua nabaseVenezuela ezidolophini; into abaxhomekeke kuyo.
... ezinye ziphantse zaphelelwa lixesha, bathetha ngokubeka umfanekiso weRadio Venceremos nokufumana iifoto zentengiso kwintengiso emnyama, babaxelele ukuba nge-Intanethi neGoogle Earth akusekho mfuneko.
... Njani ukonwaba, kulo nyaka ngesicelo seHonduras isohlwayo sokuya eCuba kwi-OAS sasuswa, kwaye ilizwe elinye laxhonywa.
… Ngelixa i-United States ibhiyozela ukuzimela kwayo kwe-233, i-Honduras izuza kwihlabathi liphela.
... hayi indlela eyoyikisayo, namhlanje kunokubakho ukuhlasela kukaChavez kwaye ihlabathi liphela liya kuvuya.
… Ndathi xa ndikwibanga lesithandathu, safika kutitshala enesikhalazo kuba kukho umntu osibethileyo, ebehlala esithi: "ndibonise igazi lakho." Ke ukuba umongameli uvuka ngeepijama zepyjamas eCosta Rica, ngaphandle kokubethwa, akukho siphango?
... phakathi kokuwela kuphazamiseko lobungxowankulu, uhlaselo lweChavismo okanye ubunzima bamaqela amancinci anomdla ... kukwenza ufune ukutya kwenye ivenkile yokutyela. Indlala inokulinda iinyanga ezintandathu, uxinzelelo, ngubani owaziyo.
... kuyo yonke le nto, ukuba andivumelani nenye yezi zinto zimbini ezigqithileyo, ndiyayeka ukuba ngabantu? kuba yile nto babizi babizi.
Le Polache ukuba wayedume ngayo, bayicula ezintlanganisweni zeAlbus for Democracy kwaye uyayidlala kunye ne-Resistance ngokuchasene nomqeshi.
... xa abantu bebona ukuba basadla i-mT3rda, iipali ziya kutshintsha, kwaye ke banokuqhubeka de u-Ursula agqithise uku-oda.
Post edlulileyo«Ngaphambilini IHonduras yakhetha enye indlela yesithathu
Post Next I-PhotoModeler, ukulinganisa nokulinganisa ihlabathi leneneOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-3 "Malunga ne-10 yamabinzana awodwa eengxaki ze-catracha"
Sithandwa sam u-Enrique, abezopolitiko (i -olitiki) abahlaselayo (kuba ezopolitiko ngokwazo azizimbi) balibeka eli lizwe kwi-eggplant, ukusuka ngoku abanalo nofifi lokuphuma.
Yonke into iyashwankathelwa kumdla wamandla, oku kuyabonwa ngabemi, (nangona ingengabo bonke abangalunganga), kumacala omabini kukho ama-apile amaninzi aneemeko zempilo ezimbalwa.
… Ukuntsonkotha kunokuba kuhle, ukuba akukho mntu uphumeleleyo. Iyandisebenzela kuba ndinethemba elininzi lokungazithembi; Ndiqinisekile ukuba kufuneka kuvele ubunkokheli obutsha.
Ndiyifundile ibhlog yakho kwiinyanga ezimbalwa kwaye ndithanda ubuchule bakho ngeenkqubo zekhompyuter kunye nolawulo lwemephu. Ngoku ekubeni ndifumene ithuba lokubuza malunga nesikhundla sakho ngokubhekisele kwiingxaki ezibandakanyekileyo kwisizwe sakho, ndiyawuncoma amandla akho okuqonda kakhulu (nangona ayothusi, unikwa indlela oyiphethe ngayo ibhlog).
Ngokubhekisele amabinzana ahlukileyo. Joer! Ukungaqondakali yimeko esikhokelela ekubeni sibeke ecaleni izikhundla zokugqibela ngokubhekisele kwintlekele kwaye oku kungasijika kuthi kungekudala.
Sizibiza ngokuba singabalulekanga (ndizibandakanya nam kuba ndinengxaki yokungakholelwa, kuba, ndikholelwa kwezopolitiko kuphela ezenza umsebenzi wazo kakuhle kuluntu, nokuba nje andicacanga ngento efunwa ngabantu). wokuba nenkoliseko kwabo banxamnye nabo bachasayo. Kodwa yeyona ndlela yokujonga izinto ngendlela yokuba basivumele ukuba siphile kwaye siphile ngokusemandleni ethu kangangokuba uninzi lweesiseko kunye neengcinga ezingalinganiyo entlokweni kwaye "abantu" abanomdla wokwazi.
Okokugqibela, kuba umbono wam kukungathethi ukuba ngubani ofanelekileyo, ndikushiya nomnye imibuzo embalwa enomdla:
Ukuba yonke into ibiphantsi komgaqo-nkqubo wezomthetho, kutheni ukuvala imithombo yeendaba, ukunqunyulwa kwamandla kunye ne-intanethi, ukulandela abapolitiki kunye nokuthumela umongameli osuswe ekuthinjweni? Ngokwesiqhelo xa begweba umntu, bambambe, bamvalele, abamnqandi ngqo.
Ukusilela oko, ukuba ngokwenene bekukho isigunyaziso sokubanjwa, kutheni bengamvumelanga lo mfo ukuba amkhuphe kwindiza bambeke ejele? Kuyakuba njalo kuba weza nabanye oomongameli ngekhe bakwazi ukuyenza. Ke, kutheni le nto udibanisa umboniso kunye? Indawo yomoya ibingavaliwe nexesha.
Ndikhathazeke kakhulu ndiyazi imeko abaqala ngayo ukuhlala kwaye ndinomvandedwa malunga nomyalezo othunyelwa ngamaqela amandla (abizwe ngasekunene). Kubonakala ngathi xa sele ulawule imikhosi exhobileyo, okuseleyo kufuneka kukukhathalele. Iyonke, ukuba umntu akayithandi, ungayifaka entolongweni okanye uyibulale, ngokufanelekileyo.
Kwelinye icala: ngaba la maqela amandla akho ngokwenene? okanye iintloko nje ezimbalwa zaqokelelwa zaza zahlangana ukubhukuqa umongameli, ityala langaphambili lentengiso.
Ukusilela oko: Kwakuza kwenzeka ntoni ukuba "uphononongo oludumileyo" lukaZelaya beluvumelekile kwaye, ngokusekelwe kwezi ziphumo, ukuthathwa ngokunyanzeliswa kwakumiselwe? Ndikhetha ukungacingi.
Iivenkile zaseburhulumenteni ezinomkhosi okanye amapolisa axhobileyo okanye "ezomkhosi" - okanye nantoni na ababiza ngayo phaya - ubuso babo bumboziwe bubonwa kumabonwakude eHonduras.
Ndiyathemba ukuba abantu bayayazi ukuba liphoso likabani. Nokuba yiChávez, okanye i-OAS, okanye nabani na ongaphandle ... vumela abo "baphetheyo" bathathe uxanduva kwaye bacinge- kwixa elizayo- lonke uxanduva ngezenzo zabo. Akukho mkhosi uvela ngaphandle uya kuhlasela nabani na. IHonduras - ngokoluvo lwam - sele ihlaselwe kwaye ngabantu baseHonduras ngokwabo. Lusizi. Ngethamsanqa, ngokwenene. Ndiyathemba ukuba into endicinga ukuba iyalandela kwezi meko ayizi. Ukuba umntu ubuza into endiyicingayo, nolu uluhlu:
-Ubundlobongela, uloyiko, ukusweleka, ukunyamalala, ukophulwa kwamalungelo oluntu, ukuhlawula amatyala elizwe, uxinzelelo lwezoqoqosho, ityala labucala elichazwe kwilizwe lonke, ukungena kwamapolisa amabini oMntla Melika, "ukuthengisa" kweenkampani zikarhulumente, ukungaqiniseki kwemfundo, impilo kunye ezinye iinkonzo zentlalo nezoluntu, ubalo, ulawulo lweendaba, ulawulo lwentlalo.
Ndiyathemba ukuba ndiyaphazama ...